Oyi (Mpi Price Fish Nri Nri igwe)
Iji mmiri & ngwakọta ikuku na -ajụ oyi iji mee ka nri azụ kwụsịchaa kpamkpam.
Usoro jụrụ oyi na -aga n'ihu na -adị n'otu, yana akpaaka dị elu.
Iji ụdị onye na -ejide uzuzu iru iji nweta mmetụta mkpokọta uzuzu kacha mma.
Ọdịdị kọmpat, enweghị ntọala siri ike, nwere ike ịgbanwe ntọala nrụnye n'efu.
A na -emepụta eriri ahụ, ogwe isi, wiil na -akwọ ụgbọ mmiri, ọkpọkọ jụrụ oyi na ihe na -eme ka ihe na -eme ka uzuzu na -adị n'ime obere nchara; akụkụ elu, ikuku mmiri, na -enyocha windo dị na igwe anaghị agba nchara.
Nkịtị Model: FSLJ-Ø1300*8700, FSLJ-Ø1500*8700, FLJ-Ø1300*8700, FLJ-Ø1500*8700, SLJ-Ø1300*8700, SLJ-Ø1500*8700
Nri azụ na -esite na Drier na oke okpomọkụ. Mgbe ị gafesịrị nyocha Sieve na Conveyor Air-jụrụ, ụfọdụ ọkụ nwere ike gbasaa, mana ọnọdụ okpomọkụ ka ga-adị gburugburu 50 Celsius. N'ihi esemokwu na -eme ihe ike na mmetụta nhịahụ n'oge usoro ngwepịa ahụ, ọnọdụ okpomọkụ nke nri azụ ga -ebili ọzọ. N'otu oge ahụ, maka na oke okpomọkụ dị n'etiti nri azụ na oke ụlọ adịghị ebu nnukwu ibu, ọnụego ọkụ ọkụ nke nri azụ ga -adị nwayọ karịa. Ọ bụrụ na etinyere nri azụ na idobe ya, ọ dị mfe iwepụta ihe ọkụ ọkụ, na ọbụna ọkụ ọkụ na -enweghị isi ga -eme n'ọnọdụ ndị siri ike, yabụ na a ga -eme ka nri azụ ọhụrụ dị jụụ na okpomọkụ ụlọ tupu nchekwa. Ọrụ nke igwe nju oyi bụ ịjụ nri azụ na oke okpomọkụ ozugbo na ọnọdụ ụlọ. Dabere na ahịrị mmepụta dị iche iche, anyị nwere ụdị ngwa nju oyi atọ, nke a ga -akọwa n'okpuru.
1.Cooler na ikuku & mmiri jụrụ oyi
Ngwa nju oyi nwere ikuku & mmiri nwere shei cylindrical na okirikiri gbara gburugburu, ọkara nke okirikiri okirikiri ka a na -ejikọ ya na ọkpọ ọkpọ, n'ime nke mmiri na -ekesa jụrụ oyi na -agafe, ọkara nke ọzọ na -eji eriri wheel na -akpali akpali. Oghere na -agba okirikiri na tube na -agagharị agịga na -ewere usoro oghere na mmiri jụrụ oyi n'ime. Ogwe ụkwụ na -akpali akpali na -akpali anụ ahụ azụ ka onye na -anakọta uzuzu na -adọta ikuku, ka nri anụ ahụ wee nwee ike ịkpọtụrụ ikuku. Mgbe ifufe sitere n'èzí na-abata na cylinder jụrụ oyi, onye na-ekpo ọkụ na-eku ya na-adọpụta ya mgbe niile iji mepụta ikuku na-ekesa jụrụ oyi, si otu a na-emezu nzube nke jụrụ oyi.
Azụ anụ ọkụ dị elu na -abanye na igwe site na mbata wee na -akpalite ya mgbe niile wee tụba ya n'okpuru ọrụ nke tube na -agbagharị na ihe mmịfe ụkwụ na -eme ka mmiri dị jụụ na -ekesa n'ime ya, a na -agbasasịkwa okpomọkụ ya mgbe niile. N'otu oge ahụ, ikuku na -ekesa ikuku na -ewepụ ikuku veti nke mmiri na -agbasasị, nke mere na a na -ebelata okpomọkụ nke nri azụ ma na -akwaga ya na mpụga n'okpuru mmegharị nke eriri ụkwụ na -akpali akpali. Yabụ na ngwa nju oyi a bụ iji mezuo ebumnuche nke ịkụ azụ azụ site na ijikọta mmiri jụrụ oyi na ikuku jụrụ oyi.
2.Air ngwa nju oyi
Maka ahịrị nrụpụta ka ukwuu, iji nweta mmetụta jụrụ oyi ka mma, anyị na -ejikarị igwe oyi na igwe oyi. Igwe nju oyi adịghị nnọọ iche na ngwa nju oyi nwere ikuku & mmiri jụrụ oyi n'ile anya, mana igwe nju oyi nwere shei cylindrical, spindle welded with the wheel wheel na -akpali akpali na onye na -anakọta uzuzu. A na -enye nri azụ site na njedebe ike, a na -akpalitekwa ya ugboro ugboro ma ihe mmịfe wheel na -akpali akpali na -agafe na ngwa nju oyi. A na-ekpocha ọkụ mgbe niile, onye na-ehicha uzuzu na-ewepụ uzu mmiri ahụ ozugbo. Ọdịdị akpa nke onye na-anakọta uzuzu nwere ike hụ na a naghị aracha anụ ahụ n'ime ọkpọkọ ikuku, na-eme ka a kwụsịchie ikuku ikuku, si otú a na-enweta ezigbo mmetụta jụrụ oyi.
3. Mmiri oyi
Ihe nju oyi mmiri bụ shei cylindrical na okirikiri gbara gburugburu nke nwere ọkpọkọ na -agba gburugburu. Oghere na -agba okirikiri na paịpụ na -agba gburugburu na osisi na -anabata usoro oghere, mmiri jụrụ oyi na -abanye n'ime. Azụ anụ ọkụ dị elu site na nbata n'ime igwe, na -akpali akpali mgbe niile ma tụba ya n'okpuru ihe nke ọkpọkọ na -agba gburugburu, azu a na -akpọkọta ya na tube gbara gburugburu ka ọkụ wee na -agbasasị mgbe niile site na mgbanwe ọkụ na -apụtachaghị ìhè. N'otu oge ahụ, ikuku ikuku na -ekesa na -ewepụ ikuku vapopu mmiri nke na -ekesa, nke mere na a na -ebelata okpomoku nke azụ azụ na -aga n'ihu na -arụ ọrụ n'okpuru ọkpọ ọkpọ, na -emezu ebumnuche nke ịjụ anụ azụ.
Nke gara aga: Igwe igwe ihe (China Factory Good Quality Fishmeal grinding Machine)
Osote: Sistemụ mbukota akpaaka (Ndị nrụpụta na -ere ahịa akpaaka akpaaka igwe zuru oke)
Igwe nju oyi nwere ikuku jụrụ oyi
Igwe nju oyi nwere ikuku jụrụ oyi na mmiri jụrụ oyi
Igwe nju oyi na onye nchịkọta uzuzu uzuzu
Igwe nju oyi na mmiri jụrụ oyi
Fishmeal Machine ngwa nju oyi
Automatic mbukota usoro (emeputa Direct ...
Drier (Akwa Ogo Nri Nri eriri igwe Pipe Drier)
Ịghasa Press (High Quality Ugboro abụọ ịghasa Press F ...
Ngwakọta ihe azụ (China Manufacturer Fish Meal Mi ...
Igwe igwe ihe (China Factory Good Quality Fi ...